स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीको चासो, भने-‘खरिदमा देखिएको विवाद के हो ? - Gokarna News from Nepal
''उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल मौन''
‘स्वास्थ्य उपकरणका सन्दर्भमा भएको के हो ? बाहिर अनेक कुरा किन आइरहेका छन् ? भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो विषय कसरी उठ्यो ? प्रश्न उठ्नुका कारण के हुन् ? ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘सरकारलाई बदनाम गर्ने नियत पनि यसभित्र छन् कि सरकारकै केही कमीकमजोरी पनि छ ?
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यो विषयमा बसेरै कुरा गर्ने बताए। ‘बाहिर विभिन्न टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्। त्यो स्पष्ट हुन मसँग बसेर गफ गर्न आउनुभए हुन्छ’, उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकरण खरिदका लागि पहिलो पटक माघ २५ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यस बेला परेका १९ कम्पनीका कोटेसनलाई थन्क्याएर सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई)लाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो।
चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ (१६.५) युआन)मा दिएको एन ९५ मास्क आठ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर), चीन सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ (३० युआन)का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) र चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ (दुई सय ८० युआन)मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर सात हजार सात सय ७१ (६५ डलर) मा खरिद गरिएको छ।
ओम्नीले पहिलो लटमा ३० मार्च (चैत १७) भित्रै सामग्री नेपाल ल्याउने बताएअनुसार सामग्री ल्याइसकेको छ। अब उसले दुई चरणमा सामग्री नेपाल ल्याउनेछ। दोस्रो चरणमा २ अप्रिल (चैत २०) र तेस्रो चरणमा ५ अप्रिल (चैत २३) भित्र सामग्री नेपाल ल्याउने सम्झौता छ। त्यसो त ओम्नीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल उच्चस्तरीय समितिको संयोजक भएलगत्तै केही स्याम्पल नेपाल भित्र्याएर परीक्षण पनि गराएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।